Accueil > Gazetin'ny nosy > Fandaniam-bola fahatany
Lohalaharana ny filoham-pirenena
Voasokajy ho anisan’ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara ka na ny fananganana paompin-drano vaovao eny amin’ny fokontany aza dia tsy vitan’ny Fanjakana raha tsy misy ny fiaraha-miasa sy famatsiam-bola avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka avy any ivelany. Maro amin’ny mpiasam-panjakana no tsy mahazo tambin-karama araka ny tokony ho izy satria tsy ampy ny teti-bolan’ny Fanjakana. Maro amin’ireo orinasa madinika manamboatra lalam-pirenena no tsy mbola nahazo ny volany, etsy ankilany mbola maro amin’ireo fotodrafitrasa nampanantenaina nandritra ny fampielezan-kevitra no tsy mbola manomboka akory satria mbola iandrasana famatsiam-bola avy any ivelany.
Manoloana izany zava-drehetra izany anefa, mbola betsaka ihany ny fandaniam-bola fahatany ataon’ny mpitondra ka lohalaharana amin’izany ny filoham-pirenena. Isaky ny midina any amin’ny Faritra ka mitokana fotodrafitrasa vaovao ny filoha, dia tsy maintsy atao amin’ny fomba faran’izay manetriketrika fa tsy vitan’ny fitsidihana ireo zava-bita fotsiny ihany. Na aiza na aiza toerana handehanan’ny filoha dia misy hatrany ny fampisehoana goavam-be hiarahana amin’ny mpanakanto maromaro izay mazava ho azy fa ny Fanjakana no miantoka ny fandaniana rehetra fa tsy ny filoham-pirenena akory. Raha hatambatra daholo ny volam-panjakana lany ao anatin’ny taona iray amin’ny fikarakarana ireo fampisehoana ireo, dia inoana fa vola be tsy toko tsy forohina mety mahavita zavatra betsaka hanasoavana ny vahoaka izay miaina ao anaty fahasahiranana lalina amin’izao fotoana.
Tsy ny fampisehoana ihany fa na ny fikarakarana (organisation) ny fahatongavan’ny filoha ao amin’ilay Faritra na distrika aza, izany hoe ny fanetsehana ireo olona an’arivony manafana ny fitsidihana ataon’ny filoham-pirenena dia azo antoka fa handaniana vola be ihany koa. Tsara anefa ny mampatsiahy fa tafiditra ao anatin’ny politikan’ny fitondrana mijoro ankehitriny ny politikam-pitsitsina, saingy mifanohitra amin’izany ny zava-misy raha ny fahitana azy. Marihana fa araka ny tatitra nataon’ny Banky iraisam-pirenena ho an’ny taona 2021, dia vola 3000 miliara tamin’ny teti-bolam-panjakana mitetina 11.000 miliara ariary no fandaniam-bola fahatany ka anisan’izany ny vola lany amin’itony fitetezam-paritra ataon’ny filoham-pirenena itony.